Sawirro: Dadka dunida caanka ka ah ee geeriyooday 2013 - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 December, 2013, 10:40 GMT 13:40 SGA
Sawirro: Dadka caanka ee dhintay 2013
Ra'iisalwasaarihii ugu horrey ee dumar ah ee ay yeelato Britain, Margret Thatcher, ayaa sanadka 2013-ka geeriyootay. Nelson Mandela, ayaa geeriyooday isagoo 95 so jir ah. Waxaa uu ahaa qareen iyo nin u ololeeya xuquuqda dadka madowga ah ka hor intaan la xirin. Markuu xabsiga ka soo baxay ayuu noqday madaxweynihii ugu horrey ee madow ah ee Koonfur Afrika. Gabadhan, Jiah Khan, oo jilaa ka ahayd Hollywood, ayaa maydkeeda laga helay gurigeeda magaalada Mumbai. Boliiska ayaa sheegay inay iyadu is dishay.
Puntland oo xiriirka u jartay dowladda dhexe ee Soomaaliya03:57
Muusigga iyo Salaamaha25:30
Carruur gaajo ugu dhimatay Buulobarde iyo dadka oo qaxaya02:07